INgqungquthela yonyaka ye-Inter-American Network ye-Cadasters kunye neRejista yePropathi- iGeofumadas
NgoNovemba, 2018 cadastre
IColombia, ngenkxaso yoMbutho weMerika yase-Amerika (i-OAS) kunye neBhanki yehlabathi, iya kuba lizwe eliphambili "INgqungquthela Yonyaka Yonyaka ye-Inter-American Network of Cadastre kunye neRejista yoMhlaba"Kufuneka kwenziwe kwidolophu yaseBototá, kwi-3, i-4 kunye ne-5 imihla kaDisemba ka-2018.
IColombia ikwizithambiso zokuzilolonga okuninzi kulawulo lomhlaba, hayi kuphela ngenxa yokwamkelwa koMgangatho woLawulo lweMihlaba yoMgangatho, kodwa nangenxa yokuba kwimiba yekhathuni ibiluphawu lokulinganisa ixesha elide, ngaphaya komxholo woMzantsi Merika. Iindlela ezilungileyo zaseColombia ngokuqinisekileyo ziya kuphakamisa indlela yokwenza umgaqo we-ISO 19152 ngentlungu encinci, ngokunokwenzeka ukudibanisa imodeli yenyani kuhlobo olulandelayo lwe-LADM, olusele ngoku kwimeko yengqiqo kwaye kuphela kwinqanaba Idomeyini eyenza ukwakhiwa kweendlela kube nzima kubaqhubi ngaphandle kokophula imigaqo esisiseko yengqibelelo; Ukuziqhelanisa nokulungileyo kuya kunceda ekubumbeni imeko yovavanyo kunye nenxalenye yeskimu sentengiselwano yenkqubo yobhaliso. Ewe, imikhwa emibi iya kuba yinxalenye yokufunda apho abanye abangafuniyo ukuya kuyo.
Ngokungafaniyo namava aphumeleleyo e-LADM ukusukela ngaphambi kokuba ibengumgangatho, njengakwimeko yeHonduras, iColombia yindawo ebonakalayo ebonakalayo; Njengomzekelo, lilizwe lesine elinabemi abaninzi eMelika (malunga nezigidi ezingama-45), elinenkunzi eyidolophu yesihlanu enabemi abaninzi eMelika (phantse abemi abazizigidi ezisi-8), idlulwe kuphela yiSao Paulo, Mexico, Lima naseNew York. . Ewe kunjalo, imiceli mngeni ifana kakhulu nomxholo jikelele weLatin America kwimiba enje ngokuncitshiswa kwamaxesha okuthenga / kweendleko, ukudityaniswa kwabadlali kwicandelo lolawulo lwexabiso lomhlaba, umphathi wengcali yokuma komhlaba / ovavanyo, kunye nokudityaniswa kwamaziko ngombono welizwe.
Okwangoku, ndishiya i-agenda yosuku lokuqala, ejolise ekuboniseni imeko kunye nenkqubela yeColombia:
I-9: 00 ndiya ku9: 45 ngamagama aMkelekileyo
I-10: I-00 i-10: I-15 i-Presentation ye-Agenda kunye neMisebenzi yokuSebenza
Vimba I-CATASTRO NEMISEBENZI YOKUBHALISWA KWI-COLOMBIA
I-10: I-15 i-10: I-55 ingumxholo weCadastre kunye ne-Registration Systems e-Colombia
IGAC - Evamaría Uribe - uMlawuli
I-SNR - uRubén Silva Gómez - I-Superintendent
I-10: 55 - 11: 10 ndijikeleze Imibuzo evela kubaphulaphuli
I-11: 10 - 11: I-30 zifundwa kwii-Multipurpose Cadastre Pilots - Sebastian Restrepo - DNP
I-11: I-30 i-11: I-45 ijikeleze Imibuzo evela kubaphulaphuli
Vimba ii-ASPECTS ZEZEKHONO
11: 45 - 12: 00 m Ulawulo loLwazi lweZithuba - uJan Daniel Daniel Oviedo - UMlawuli DANE
12: 00 m - 12: 25 m Ukuqulunqwa nokuphunyezwa kweModeli yeLADM - iGolgi Alvarez - SECO Consultant
I-12: 25 - 12: 45 m Ubuchwepheshe obuthile kunye nobuchule bokulawulwa kweMhlaba - Mathilde Molendjk - iKadaster Holland - uCamilo Pardo - Umcebisi weBhanki yehlabathi
I-12: 45 - 1: 00 pm - I-Round of Questions kubaphulaphuli
IZINTO ZEMICIMBI YESIHLOKO III
I-2: 00 pm - 2: 20 pm Iinkalo zobuhlanga - uGabriel Tirado - DNP
I-2: I-20 PM - 2: I-30 PM Round Questions Imibuzo
I-2: I-30 PM - 2: Iinkalo ze-gender ze-50 PM - uEva María Rodríguez - Ucebisi
I-2: I-50 PM - 3: I-00 PM Round Questions Imibuzo
I-3: 00 PM - 3: 20 PM Isixazululo sesigqibo sokuxabana - uGonzalo Méndez Morales - I-Chamber of Commerce yaseBototá
I-3: 20 PM - 3: I-30 PM Ijikelezo lemibuzo
Ekupheleni kwemini kunomhla weengcebiso zeColombia kunye namanye amazwe athatha inxaxheba.
Apha ungabona I-agenda yezinye ezimbini iintsuku, ngezinga eliphantsi leenkcukacha njengoko kuchaziwe ngasentla.
American Network of Cadastre and Land Registry, wadala 2015, njongo ogama main ukukhuthaza ekomelezeni amaziko Cadastre and Land Registry in Latin America kunye Caribbean njengomnye izixhobo yolawulo loluntu ukwenzela ukufaka isandla ekuphuculeni ulawulo lwentando yesininzi nophuhliso loqoqosho. Ukususela ngoko Network uye ngokwayo nokukhuthazwa zommandla kuphela entsimini, ukufikelela nokukhuthaza igunya kwezopolitiko yengingqi ngaphandle umongameli ebizwa 2018: Ukuqiniswa kwe-cadastre kunye nokubhaliswa kwepropati kwiMerika kwisakhelo seSigqibo ekuqiniseni iDemokhrasi AG / RES. 2927 (XLVIII-O / 18)
Post edlulileyo«Ngaphambilini Inkqubo enhle yokugcina isikrini kwaye uhlele ividiyo
Post Next Ukuvakala komsindo kunye nevidiyo kunye ne-Screencast-o-matic kunye ne-Audacity.Okulandelayo »
Iimpendulo ezi-2 "kwiNkomfa yoNyaka ye-IV yeNethiwekhi yeMelika yaseCadasters kunye neRegistry yePropathi"
UJaime René uthi:
Ngaphezu kwesihloko sepropati kuyadingeka ukuba ukungafezeki okungathandabuzekiyo okanye uhlobo lokunene lowo unalo ngexesha elithile linyamalale. Ukuqiniswa kwamaziko okuqinisekisa ukuba ilungelo kunye nokusetyenziswa ngokupheleleyo kwezophuhliso lwezobuchwepheshe kuya kunceda. Amaxesha amaninzi abachwephesha bokwenyaniso bayadingeka kwizinto ezifanelekileyo zomgaqo-nkqubo woluntu ukuba usebenze, ngaphandle koko ingxaki ixazululwe kodwa enye eyona yenziwa.
Eduardo Martinez uthi:
Malunga nokuqina kwamalungelo epropathi, kunye nokufezekisa iinjongo eziboniswe kwiphepha lokubonisa, ndiyakholelwa ukuba kufanelekile ukuba itayitile lisixwebhu kuphela, kodwa libandakanye nelungelo ngokwalo ukuthintela ishishini lokufumana, okanye uthe Ngaphandle koko, uphuhliso loqoqosho olusekwe kusetyenziso olusebenzayo lwamalungelo epropathi, alunakubakho phantsi kokungaphumeleli kwikhonkco lezihloko, oko kukuthi, isenzo sebango kufuneka sinqunyelwe